Qodobbada maskaxda lagu hayo haddii aad iibsanayso kiniin Android ah | Androidsis
antocara | | Qalabka kale, Kiniiniyada Android
Waad ka fikireysaa kuu iibso kiniin Android ah wax yar ka dib? Haddii jawaabtaadu tahay mid xaqiiqo ah, waxaad xiiseyn kartaa waxa aan kuu sheegi doono marka xigta. Illaa iyo hadda waxaan aragnaa sida aaladda kiniiniga noocaas ah leeyihiin Android sida nidaamka qalliinka, waxaa jira qiimayaal aad u kala duwan iyo waliba noocyo aad u badan oo nooca qalabka ay ku darayaan ah. Dabcan, midkeenkeenu ma jecla inuu lacag qasaariyo, laakiin iibsiga jaban ayaa qaali noqon kara dhamaadka iyo iibsashada qaaliga ah waxay noqon kartaa lacag lumis aan waxtar lahayn.
Waxaan isku dayi doonaa inaan sharaxo qodobbada aan u arko inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee la fiirinayo marka aad ku dhex milmayso hawsha raadinta kiniinka. Shakhsiyan, waxaan u maleynayaa in waxa ugu horeeya ee la sameeyo ka hor wax kasta oo kale ay tahay in laga fikiro oo warqad lagu qoro isticmaalka aan doonayo inaan siiyo kaniiniga oo ku saleysan raadintaas. Waxay noqon kartaa in waxa aad rabto inaad sameyso aan dhab ahaan lagu sameyn karin aaladaha noocan ah ka dibna hubaal waad eedeyn doontaa Android ama soo saaraha, marka ciladdu aysan waxba ka badneyn taada.
Qodobbada la eegayo asal ahaan waxay u soo dhacayaan laba, qalabka iyo softiweerka. Halkan waxaan horeyba u ogaa inaad u maleyneyso inaan ahay nin caqli badan :) Waxaan fahansanahay in markaan iibsanayno kaniiniga aan iibsaneyno wax soo saar aan dib loo cusbooneysiin doonin ugu yaraan ku dhowaad labo ama seddex sano isla markaana aan sidoo kale ka warqabno in waxa aan soo iibsaneynaa aysan aheyn kiishado tubooyin ah iyo inay leeyihiin qiimaha ay tahay inuu ku wareegsan yahay shabakadaha netboooks.
Waxaa jira noocyo badan oo kiniinno xayaysiis ah iyo ficil kasta oo leh qaybo kala duwan. Qodobbada ugu muhiimsan ee si macquul ah looga eego aragtidayda waa processor-ka, RAM, shaashadda iyo batteriga, qaybaha intiisa kale sida dekeddaha, GPS, dareemayaasha, iwm ... in kasta oo ay leeyihiin xiriirkooda shaqsi ahaan waxaan u maleynayaa inay yihiin maahan qodobbo aasaasi ah marka la dooranayo kiniin iyo halka aan ka dooran karno mid ama nooc kale.
Processor: processor-ku waa wadnaha aaladda sida Smartphone-ka waxaa ku shaqeeya soosaarayaal iyo xawaare kala duwan. Wax walba waxay muujinayaan in Nvidia tegra 2 waxay noqon doontaa tusaalaha caadiga ah ee la fiirinayo. Xawaaruhu wuxuu ahaan doonaa ugu badnaan 1 ghz. Samsung ayaa sidoo kale cusbooneysiin doonta mid cusub Orion dual core in mabda 'ahaan ay bixiso natiijo weyn.
Miyaan soo iibsan karnaa kiniin wata processor aan ka ahayn noocyadan? Archos wuxuu sii kordhayaa ARM Cortex A8 Maqnaanshaha baaritaanka, waxaan aragnay inay si wanaagsan u dhaqmaan, laakiin waxaan dhihi karnaa kuwani waxay noqon doonaan kuwa dhexdhexaadka hoose Kiniiniyada Android. Wax kasta oo aan laba geesood ahayn marka loo eego aragtidayda uma qalanto umana qalanto sababtoo ah qiimuhu wuxuu aad ula mid noqonayaa kuwa sameeya oo ay ku jiraan labada geesood.
RAM: Qaybtani waa qayb macluumaad ah oo aanan garanayn sababta ay shirkaduhu u siin waayaan markay yidhaahdaan waxay leeyihiin GPS, ama dareemayaal iftiin leh ama xog kale, way adag tahay in laga dhex helo faahfaahinta laakiin tan wax waa cad yihiin, waa ka sii fiican yihiin.
Shaashad: Kiniinku waa terminaal aan ku adeegsan doonno farahayaga isla markaana aan si toos ah shaashadda ugu soo qaadan doonno, marka waxyaalaha ugu muhiimsan waa tan. Taasi waa nooca awoodda, waxaan dhihi lahaa inay sharci ahaan qasab noqoto, J Marka loo eego cabbirka, waxaan qiyaasayaa in si faa iido dhab ah looga helo terminaalyadan waa inay ahaadaan ugu yaraan 9-10 inji.
Sababtoo ah? Isticmaalka ugu badan ee la siin doono kaniiniga ayaa ah in la maareeyo waxyaabaha ku jira warbaahinta badan, ha ahaato fiidiyoow, sawirro, shabakadda internetka oo fiidiyowyadooda gundhigga u ah iyo wixii la mid ah. Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen isku raaci doono in tan sifiican looga sameeyo shaashad weyn marka loo eego ta yar. Xalka ugu yar ee 1024 × 600 pixels iyo nooca LCD ayaa noqon doona barta bilowga.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka kiniiniyada waa dhaqdhaqaaqooda iyo tayadaas gudaheeda waa inaan kala saarno laba dhinac, miisaanka iyo ismaamulka. Terminal ahaan mabda 'ahaan loogu talagalay in lagu taageero gacmaha waa inuusan laheyn culeys xad dhaaf ah. Si aad uhesho tusaale tixraac ah, iPad-ka oo aan lahayn isku xirka 3G wuxuu culeyskiisu yahay 680 garaam, moodelkiisuna wuxuu leeyahay 730 garaam.
Haysashada culeyskan tixraaca waxaan kuu sheegi karaa in markii aad iPad haysatid in muddo ah uu culeys noqdo, marka haddii Kiniiniga Android in aad raadineyso culeys ka badan kuwa 730 garaam, waxaad horeyba u ogtahay in saacad kayar ay kugu qaadaneyso culeyskeeda.
Batariga sidaan soo sheegnay waa qodob kale oo ah in la tixgaliyo marka la eego dhaqdhaqaaqa, adoo haysta batteri kuu ogolaanaya ugu yaraan 6 ama 7 saacadood oo aad shaqeyn karto waxaan u maleynayaa inay tahay tan ugu yar ee aad ku dooran karto moodel ama maya.
Ilaa hadda waxaan tixgelin lahaa sifooyinka ugu yar ee aasaasiga ah ee lagu xisaabtamo marka la dooranayo a Kiniiniga AndroidDabcan, qeexitaanada intiisa kale waxay leeyihiin muhiimadooda laakiin waxaan si daacad ah uga tagi lahaa kaalinta labaad. Waa maxay sababta labaad? Aynu nidhaahno illaa iyo hadda waxaan qaabeynay salka qalabka iyo waxa haray waa kuwa dheeriga ah ee aan dhammaanteen u baahan karin ama aan kulligeen isku baahi lahayn.
Waxyaabahaas dheeriga ah waxaan dhigay labadaba USB-ga kala duwan iyo wax soo saarka HDMI, iyo sidoo kale ku darista GPS, isku xirka 3G, iwm ... Waxaan sii wadaa sharraxaad yar, aniga ahaan 3G isku xirnaanta kiniinnada ayaan loo baahnayn maxaa yeelay waxaan horey u haystay xiriir xog ah oo ku saabsan Taleefankeyga casriga ah iyo waqtiyada aan u baahanahay inaan ku isticmaalo isku xirnaanta noocaan ah kaniiniga maadaama aan sameyn doono isku xir. Xaqiiqdii waxaa jiri doona dad aan ku xirneyn xiriirkan mobilka ama doorbida kuwa leh xiriirkan sababo la xiriira isticmaalkiisa. Sababtaas awgeed ayuu uga faallooday astaamaha astaamaha kiniiniyada inay yihiin dhadhan shakhsiyeed oo aan ahayn sifooyin muhiim ah
Dhinacaan waxaan u maleynayaa inuu aad muhiim u yahay oo Android waa wax walba, sidaan ognahay dhammaan noocyada Android isku mid ma aha. Waxaan horey uga faalloonnay marar badan sida Google ay u tidhi Froyo ama Android 2.2 maahan nooca ugufiican nidaamka qalabka nooca kiniiniga ah. Haddii aan hadda iibsanno kaniiniga, waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono ayaa ah in aan hubiyo in kaniini uu helayo kan u cusbooneysii Gingerbread dabcan sida ugu dhakhsaha badan ayaa u roon, haddii aysan ahayn kiiska, si toos ah ayaa looga reebay. Waxaan horey u ognahay in suuqa ay maanta daadadku la socdaan "kiniiniyada Android", imisa ka mid ah ayaad u maleyneysaa si hubaal ah inay heli doonaan Android 2.3 ama Android 3.0? Waxaan u maleynayaa faraha hal gacan inaan ku tudhi karo.
Qodob kale oo khuseeya barnaamijka waa in la ogaado haddii ay leedahay barnaamijyada google rakibay ama uguyaraan Suuqa Android inkasta oo ay macquul tahay hadii ay sidato Suuqa inay qaadan doonto inta hartay. In kasta oo Android u oggol tahay rakibidda codsiyada meel kasta oo ka mid ah oo aan loo baahnayn in la helo Suuqa Android, suuqan "rasmiga ah" waxaa ku yaal tirada ugu badan ee codsiyada la heli karo waxaan sidoo kale haysannaa suurtogalnimada helitaanka inta kale ee Suuqa.
Shirkadaha qaar sida Archos ama Toshiba waxay leeyihiin Suuq u gaar ah oo ma rakibaan Google, kuwaan waxaan ku heli karnaa codsiyo aad u tiro badan oo aan ku rakibo kiniiniyada laakiin xitaa kuma dhaweyno tirada aan ku leenahay Suuqa Android.
Haddii qalabka aan aragnay uu buuxiyo shuruudahayaga sidoo kalena qiime ahaan waa midka sida ugu fiican noogu habboon laakiin ma leh Suuqa Android, waa in la fiiriyaa haddii si aan rasmi ahayn loogu rakibi karo.
Miyaad ka fikiri kartaa qodob kale oo aad muhiim u aragto markaad iibsanayso kiniinka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Qodobbada maskaxda lagu hayo haddii aad iibsanayso kiniin Android ah
haddii aad rabto in aad dijo
Maqaal wanaagsan. Xaaladdayda, waxay waxoogaa ka sii caddaynaysaa. Illaa iyo hadda, waxaan aad u soo jiitay Archos 101, oo la xiriirta tayada / qiimaha, laakiin waa run in heerka processor-ku uusan yeelan doonin mustaqbal xad-dhaaf ah ama cusbooneysiin ... Ma ahan inaan weydiinayo kiniinka wax kasta oo xad-dhaaf ah (e-buugaag, fiidiyow, internet ayaa noqon doona isticmaalka ugu badan) laakiin fiidiyowyada aan ku arkay waxay muujinayaan "dib-u-dhac" ku-meel-gaadhka ah, waana in aynaan iloobin in Froyo aysan weli ahayn aaladda ugu habboon ee kiniiniga ah .
Waxaan u xiisay dhowr "talooyin toos ah", si aan hubaal afka u furo, hehe.
By habka, website aad u fiican iyo articles fiican. Dhamaan wanaag.
Ka jawaab sihayqueirseva
Mahadsanid, markaan qaar tijaabiyo waxaan kugula talin doonaa 🙂
Waxaan soo celiyey Toshiba FOLIO 100 maxaa yeelay si fiican uma shaqeeyo. Codsiyada maahan kuwo u qalma waxna ma leh Flash player ayaa la soo bandhigayaa. Waan sugi doonaa si aan u arko waxa soo baxa maxaa yeelay ma doonayo inaan ku dambeeyo gacmaha "tufaaxa" Salaan
Kuma raacsani cabirka shaashadda ugu yar oo ah 9-10 inji, waxaan u arkaa tabka loo yaqaan 'galaxy tab' oo leh 7 inji iyo in ka yar 400 garaam xulashada ugu fiican haddii aysan ahayn maxaa yeelay waa qaali
Qaali haa waa haa, haa. 🙂
Waxaad ka leedahay wax ku saabsan cusbooneysiinta 2.3 ama 3.0 laakiin sidee annaga macaamiil ah aan u hubin karnaa in shirkadaha ay u cusbooneysiin doonaan nidaamka hawlgalka ee soo socda? maxaa yeelay haddii aan aado dukaan kasta oo aan iibsado, waxay u badan tahay inay igu odhan doonaan haa inay i iibiyaan kaniiniga laakiin ma haysto dammaanad in shirkaddu iibin doonto.
Ku jawaab Osozgz
Taasi cidna ma xaqiijin karto, waa inaan aaminno waxay noo sheegaan, waa dhibaato
Maqaal wanaagsan, gabi ahaanba waan ku raacsanahay soo jeedinta badankood.
Waqtigan xaadirka ah maqnaanshaha ogaanshaha arrimaha jilicsan wixii aan ilaa hada ku arkay waxaan ku arkaa indhahayga Adam Notion Ink (oo aan lahayn 3G, oo aan u arko inaan loo baahnayn qalabkan sidaada oo kale)
Dhinaca kale anigu kuma raacsani Andy Garcia arrinta tabta Galaxy, taas oo aan u arko fikirkeedu in aanu ahayn taleefan casriyeysan ama mid miiska la soo dhigayo .. waa sida isku darka labada ka dhexeeya (waxaan ku adkaystaa… fikirkayga).
Keebaad ku haysataa Darajada # 1?
Miyaad u maleyneysaa inay mudan tahay inaad dhowr bilood sugto jiilka 2aad inay soo baxaan ama xitaa sugaan inta ay kula soo baxayaan Sanjabiil?
Mabda 'ahaan Adam, waxay umuuqataa mid wanaagsan laakiin waa inaan sugnaa inaan aragno hawlgalkeeda dhabta ah. Sidoo kale Adventvega sidoo kale ma xuma. Waa in la tijaabiyo
Oo yaa sheegay in Android 3.0 uu noqon doono Tablet Pc? Inta aan ogahay, wax walba waa mala awaal, Google waxba ma xaqiijin ...
Cabirka 9 ama 10? Ka soo horjeedka. 7 ″ waa mid aad loo qaadi karo oo ka culus, mana u maleynayo inuu sii joogi doono nus mobile iyo nus kiniin ah ... waxaan u arkaa inay ka raaxo badan tahay
Iyo sidoo kale, sida loo adeegsado codsiyada google, haa, waan oggolahay, laakiin marar badan ayaa la xalliyaa, si ka fudud (Sida ku jirta Archos) ama ka sii dhib badan (Sida ku jirta Zt-180), iyo kuwo kale oo ay wadaagaan roms kale (Sida la qiyaasayo in waxay la dhici doontaa Toshiba).
Macluumaadkaagu aad buu u wanaagsan yahay!